Ny kanto sy ny siansa amin'ny marketing amin'ny atiny | Martech Zone
Na dia ny ankamaroan'ny zavatra soratantsika ho an'ny orinasa aza dia heverina ho mpitarika, mamaly ny fanontaniana napetraka matetika, ary ny tantaran'ny mpanjifa - karazana votoaty iray miavaka. Na lahatsoratra bilaogy, infographic, whitepaper na horonan-tsary mihitsy aza, ny atiny misy fampisehoana tsara indrindra dia mitantara tantara izay nohazavaina na naseho tsara, ary tohanan'ny fikarohana. Ity infographic avy any Kapost ity dia tena mampiaraka izay mahomby indrindra ary ohatra tsara amin'ny… fitambaran'ny art and science.
Ny tontolon'ny siansa sy zavakanto matetika no heverina ho miavaka. Fa ny mpivarotra atiny tsara indrindra dia mampiditra ny roa amin'ny asa atiny tokana. Manararaotra lesona avy amin'ny angon-drakitra izy ireo mba hampivelarana atiny miova fo, na dia manosika mihoatra ny satan'ny status amin'ny endrika sy fantsona vaovao aza. izany Sary torohay mandinika ny herin'ny atiny izay mampiditra ny ankavia sy ny ankavanan'ny ati-doha, ny kanto ary ny famakafakana.
Ny fizotrantsika amin'ny famokarana atiny ho an'ny mpanjifanay dia manaraka tsara an'io fomba io. Manao fikarohana sy famolavolana mifanila izahay, avy eo mitantara tantara eo amin'ny fihaonan'izy roa. Ny fikarohana lehibe dia manome ny vilona izay manampy ny olona iray hatoky ny vaovao hitany ary ny tantara tsara iray manampy azy ireo hirotsaka am-pientanam-po amin'ny atiny. Mahafinaritra izany!
Tags: Analyticshamakafaka ny zava-bitaRehefa mandinikakantoart and sciencefampielezan-kevitrafifandraisanalamina datafihetseham-potraikefazava-misyfihetseham-poSary torohayzava-baovaokaposttaratrafmhafatraoriginalitylaminafampiharanafampahafantaranafampifanarahana amin'ny varotraFanamafisana ny varotrasiansafitantaranatetikaherysariohatrafitilianaTantara amin'nyfitaovanasary